Wararka - Tilmaamo si loo yareeyo qalabka runout router alwaaxa
Talooyin si loo yareeyo runout qalab ee router CNC qoryo
Markaan isticmaalno alwaax CNC router wax soo saarka xardho, haddii xarunta aaladdu aysan waafaqsanayn xarunta wareegga ee dunmiiqa alwaax CNC router, waxay sababi doontaa qulqulka qulqulka ee aaladda, taas oo ah, wareegga aaladda ma ahan mid urursan. Tani waxay sababi doontaa saamaynta xardhanaanta iyo saxnaantaalwaax CNC router inuu yaraado, oo xitaa sababo in qalabku jabo. Sidaa darteed, waa inaan ku dadaalnaa sida ugu fiican ee aan uga fogaan karnaa xaaladaha noocaas ah inay dhacaan.
Marka sideen u xallin karnaa dhibaatadan?
Ugu horreyntii, iskaashiga aaladda iyo shaashadda alwaax CNC router, iskaashiga chuck iyo lowska, in habka loo raro qalabka ay sax tahay, iyo tayada aaladda lafteeda ayaa ah dhamaan waxyaabaha sababa in qalabku ka baxo jihada shucaaca. Sidaa darteed, waa inaan marwalba fiiro gaar ah u yeelano nadiifinta cufka iyo lowska si loo hubiyo inaysan boodh jirin; xoogga mindida waa inay ahaato mid habboon, aad u weyn ama aad u yar ma shaqeyn doono; dhererka kordhinta qalabka waa inuu sidoo kale kayaryahay. Intaas waxaa sii dheer, xawaaraha mootada dunmiiqa waa in fiiro gaar ah la siiyaa marka loo baahdo, gaar ahaan qalabka aan u baahnayn xawaaraha dunmiiqa aad u sarreeya, sida naxaasta birta ah, iwm. qalabka.
Marka labaad, yareynta xoogga jarista shucaaca sidoo kale waa hab lagu yareeyo socodka wareega. Tusaale ahaan: adeegso qalab fiiqan; hubi habsami u socodka wejiga raajada ee aaladda; isticmaal qashin-goynta inta lagu jiro dhammaynta. Ogsoonow in qarash-soo-saarka waxaa loo isticmaali karaa oo keliya dhammaystirka. Haddii qashin-qubka la doonayo in la sameeyo, hoos-u-qarameynta waa in la adeegsadaa, haddii kale waxay si toos ah u saameyn doontaa nolosha adeegga aaladda